सँधै धनको अभाव गराउँछ मानिसका यी ५ गलत बानीले, कतै तपाईले पनि गर्नुभयो की ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/सँधै धनको अभाव गराउँछ मानिसका यी ५ गलत बानीले, कतै तपाईले पनि गर्नुभयो की ?
३) बिहान र बेलुकाको समय दैवी शक्तिको लागि खास महत्वपूर्ण मानिन्छ । उक्त समयमा घर, पसल वा अफिसको मन्दिर र भान्छामा अँधेरो राख्नु अशुभ मानिन्छ । यसर्थ, हरेक दिन बिहान र साँझ कम्तिमा पनि एउटा बत्ती बाल्नुपर्छ।
४) जो व्यक्ति साधु–सन्त वा घरको ठूलो मानिसको अपमान गर्दछ, उनीमाथि देवी लक्ष्मी रिसाउँछिन् । यस्ता मानिसहरुले लाख कोसिस गर्दा पनि धन लाभ गर्न सक्दैनन् र चाहेको सफलता हासिल गर्न सक्दैनन्।
५) शास्त्रका अनुसार बिनाकारण वा ज्यादा रिसाउने बानी पनि देवी लक्ष्मीलाई क्रोधित बनाउने तरिका हो। जुन घरमा झगडाको माहौल बनिराख्छ, त्यहाँ लक्ष्मीले बास गर्दिनन्। यसकारण बिनाकारण रिसाउने बानी हटाउनु पर्दछ।